Demanaani Waa Halis: Maanso cusub/Waxa Curiyay: Abwaan Nimcaan Aadan Ibraahim | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Demanaani Waa Halis: Maanso cusub/Waxa Curiyay: Abwaan Nimcaan Aadan Ibraahim
Maansadan oo magaceeda la yidhaahdo Demanaani waa Halis oo uu hal-abuuray abwaanka da’da yare e Nimcaan Aadan Ibraahim, waxay ka hadlaysaa maalgashiga ay shirkadda imaaraadka carabta ee DP World ku samaynayso dekadda Berbera.
Waxaanu abwaanku bulshadda hogo tusaalaynayaa u jeedadda dhabta ah ee arrinta maalgashiga, faa’iidadda dadka Somaliland ugu jirta siday lagama maarmaanka u tahay in marka xukuumadu heshiisyo noocaas ah la gelayso shirkado ama dawlado shisheeye loogu baahan yahay in la iska hubiyo.
Maansadaasina waxay ku bilaabmaysaa sidan:
Daymo feejignaan bay
Runtii kuugu darartaa
Degenaantu waa Sade
Degdeg looma qaadoo
Dafdaf lalama boodee
Dareen iyo itaal baa
Lagu daan qabtaayoo
Daryeel loogu taliyaa.
Durduraduse waa shile
Duunyaduu nin kale sido
Dabac looma qaatee
Danta muxuu ka leeyaa
Dulucdeed la baadhaa.
Dagnaan ha u riyaaqinoo
Doolarkuun ha eegine
Daah rog xaajadani ugub
Doox ubucda sheekada
Day day oo ujeedadu
Waxay daaran tahay garo.
Danta aan ka leeyahay
Docda aan u dhaafoo
Damacood muxuu yahay
Ma deeqbaa ma dayraa
Ma dabino qarsoon baa
Dal boob iyo miyaa tolow
Degel goofin khayraad.
Dejin ciidan xoogliyo
Dabro weerar ba,aniyo
Ma duulaan badheedhaa.
Daryeel baan wadnaa iyo
Dumbuqyaa Ku hoos jira
Isu dawba maahoo
Didmay nagu abuurtaye
Daya daya waxbaa dedan.
Hoos u daya waxaa dedan
Dood geliya xaajada
Duqaydana la kaashada.
Dani ma hurto weeyee
Dadku wuxuu aqbali karo
Dalna lagu hoogaamiyo
Deg deg noogu sheegoo
Soo hor dhiga dadweynaha.
Deelkan waxan Ku soo xidhay
Demanaani waa halis
Hadaan laga digtoonaan.
Waxaa Curiay Abwaan Nimcaan Aadan Ibraahim